AMBOHITRIMANJAKA : Taksibe ao amin’ny koperativa Kofibami nivadika ambony ambany, olona 5 naratra
Omaly maraina tokony ho tamin’ny 6 ora teo ho eo no nitrangan’ny lozam-pifamoivoizana indray ny lalana mampitohy an’Antananarivo amin’Ambohitrimanjaka. Fiara lehibe mpitatitr’olona ao amin’ny koperativa Kofibami iray handeha ho any Ambohitrimanjaka no nivadika ambony ambany ka nandritra olona maro sy nahasimban-javatra betsaka. 30 mars 2011
Araka ny fanambaran’ireo olona nanatri-maso dia « olona nitondra moto no nikasa hisongona olona mitondra bisikileta. Tsy mbola voasongony anefa ilay bisikileta dia nifanehatra tamin’ity fiara lehibe mpitatitr’olona ity. Niezaka ny hiala ilay moto ihany ny mpamily ilay fiara lehibe ka izany no nampivadika azy ambony ambany ».
Voatsindry tao ambanin’ilay taksibe ilay moto nofaohiny. Vokany olona dimy no naratra ary ramatoa iray tao anatin’ilay taksibe no fantatra fa tena naratra mafy. Ity farany dia nosokirina mihitsy vao afaka. Nahitana fahasimbana maro ity taksibe ity. Telo mianaka kosa no nitaingina ilay moto ary ireo zaza no naratra saingy tsy misy ahiana ny momba azy ireo satria narovan’ny aroloha na dia tafapitika teny afovoan’ny arabe aza ny iray. Araka ny fanampim-panazavana azo ihany dia olona enina no tao anatin’ny fiara fitaterana ity ary avy any 67 ha hihazo an’Ambohitrimanjaka.
Maro ihany koa no nilaza fa noho ny haratsian’ny lalana matetika no nahatonga ny loza amin’iny lalana Ambohitrimanjaka iny. Efa taona maro lasa izay no tsy nisy fanamboarana intsony ny. Etsy andaniny anefa dia mirimorimo mafy ireo mpamily mandeha amin’izany, fa tsy mahalalala ny loza mety haterak’izany, indrindra fa amin’ny ora maha be ny mpandeha. Mifanenjika ireo mpamily amin’izany. Ny mpandeha avokoa no mizaka ny zava-bitan’ny mpamily amin’izany ankoatra ny tahotra amin’ny fandehanana mafy.
Vao tapa-bolana mantsy izay no taksibe amin’ity zotra B ity ihany no saika nivadika teny amin’io toerana io. Tsy nisy jiro ilay fiara no sady mbola nitrifana ihany ilay mpamily. Tsy nohenoiny mihitsy ny fitarainan’ireo mpandeha nyamin’ny tokony handehanana mora. Nanao bemarenina ilay mpamily ka saika nivarina an-tanimbary ilay fiara.